ပန်းပန်နေဆဲမြန်မာပြည်ကြီး နှင့် ရွှေပြည်တော်ကြီး မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပြီ …. - Thu Ta Myay
Home/Local/ပန်းပန်နေဆဲမြန်မာပြည်ကြီး နှင့် ရွှေပြည်တော်ကြီး မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပြီ ….
ပန်းပန်နေဆဲမြန်မာပြည်ကြီး နှင့် ရွှေပြည်တော်ကြီး မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပြီ ….
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့
ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေးတွေ ပြန်စတယ်။ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ကြတယ်။ COVID ကို နိုင်လိုက်ပီဆိုပီး ရဲဝံ့စွန့်စားလိုက်ကြတယ်။ Mask တွေ မတပ်ကြတော့ဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ COVID က နောက်တကြိမ် ထတွယ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ မြို့တွေ ပြန်ပိတ်လိုက်ရပီ။ Lock Down ပေါ့။ ၃လ ကျော် ပိုးကူးတဲ့သူ တယောက်မှ မတွေ့ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ ၃ ယောက် သေသွားပီ။
ထိုင်းမှာလဲ အသဲအသန်။ အမေရိကန်မှာလဲ မရပ်တန့်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် စည်းကမ်းတွေကို မလျှော့လိုက်တဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲတွေ၊ ရှိုးပွဲတွေ၊ ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကနေ အတော်ကူးစက်ကြပါတယ်။
ကျနော်တုိ့ နိုင်ငံကတော့ ပန်းပန်နေဆဲပါပဲ။ အခု ပိတ်ရက်တွေမှာ လူတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့ စိတ်ချလက်ချ ခရီးသွားကြပါတယ်။ ၃ ၄ လ လောက် အိမ်တွင်းပုန်းနေရတော့ သွားချင်ကြမှာပါပဲ။
အခုလို သွားနိုင်ကြလို့လဲ ကျေနပ်မိပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေချိန်မှာ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်တာ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒီရလာဒ်က ကမ္ဘာကို ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ အရင်ကလို မဟုတ်တော့ပဲ တနေရာမှာ တခုခုဖြစ်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကမ္ဘာက သိကြတဲ့ခေတ်ထဲမှာ မြန်မာလို ငမွဲနိုင်ငံ၊ လူ့အရင်းအမြစ်၊ အထောက်အပံ့နည်းတဲ့နိုင်ငံက ဘာလို့ ဒီရောဂါကြီးကို ထိန်းနိုင်နေတာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
နောက်ပီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာလဲ စနစ်တကျနဲ့ နှိုးထမှု ရှိတယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာက လက်ခံလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအပေါ် အကောင်းမြင်မှုက များပြားလာပါတယ်။
ဒါရဲ့ အကျိုးဆက်က ဆက်တိုက်ခံစားရပါတယ်။ COVID ကာလမှာ အထည်ချုပ်က အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပိတ်လိုက်ရတာတွေ မနည်းမနော ရှိပေမယ့် အနောက်တိုင်းက မြန်မာ့အထည်ချုပ်ရဲ့ အားကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ မပြိုလဲအောင် EU က ငွေကြေးထောက်ပံ့ပါတယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ငွေချေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်လို နိုင်ငံတွေကလဲ မြန်မာ့အရေးဆိုပီး စကားလုံးတိုက်ပွဲထဲ ပြန်ပါလာပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စက တခန်းရပ်သွားပါပီ။
အမေရိကန်က သူ့အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ပါတယ်။ တရုတ်လက်ထဲ လွှတ်ထားလိုက်ခြင်းဟာ ခါးပတ်လမ်းကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပီး အမေရိကန်အတွက် အထိနာစေနိုင်ပါတယ်။
COVID ဖြစ်လိုက်ခြင်းဟာ တရုတ်သမ္မတရှီရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကြီးအကျယ် နှောင့်ယှက်လိုက်တာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေက ထင်ထားသလို မဖြစ်တော့ပဲ ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာက တရုတ်ကို ဖိအားပေးချိန်မှာတော့ ဂျပန်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနီးကပ်မဟာမိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဂျပန်က မြန်မာရဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ပုံကို လေးစားသလို ပထဝီအနေအထားကိုလဲ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ တရုတ်က ထွက်လာမယ့် ဂျပန်လုပ်ငန်းတွေကို ခေါ်နိုင်ဖို့ အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးက အသည်းအသန်ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေစုက ဟိုတနေ့က အစည်းအဝေးမှာ ဂျပန်တွေ အကုန်စိတ်ဝင်စားသွားမယ့် စီမံကိန်းကြီးကို ချပြလိုက်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်က စက်မှုဇုန်ကြီးပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်လာမယ့် အဲဒီစက်မှုဇုန်ဟာ အကောင်းဆုံးလဲ ဖြစ်လာမှာပါ။
သူနဲ့ အတူ တည်ဆောက်မှာက ပဲခူး-ကျိုက်ထိုလမ်းမကြီး၊ ဟံသာဝတီလေဆိပ်သစ်ကြီးနဲ့ လှည်းကူးက စက်မှုဇုန်ပါ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလမ်းမကြီးဟာ ပဲခူး-သန်လျင်လမ်း၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်၊ ဟံသာဝတီလေဆိပ်သစ်ကြီးနဲ့ ရန်ကုန်-မန်းလေး အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ကားလမ်းက ထိုင်းအထိ ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပတ်လမ်းကြီးကို အရှေ့-အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြန်(East West Economic Corridor) ရဲ့ တစိတ်တဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို ဂျပန်တွေက အတော်ကို စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ပထဝီအနေအထားက ကျန်အာဆီယံ နိုင်ငံတွေထက် ပိုကောင်းနေလို့ပါ။
အဆင်ပြေပီဆိုရင် အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ငွေကြေးဘီလီယံနဲ့ချီပီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာမှာပါ။ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကနေ ထိုင်းမှာ သွားလုပ်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ တိုင်းပြည်ထဲမှာပဲ အဆင့်မှီမှီ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို စက်မှုဇုန်ကြီးတွေ တည်ဆောက်ပီးရင် မီးရဖို့ လိုပါတယ်။ ဟိုတနေ့က ဂျပန်က ထုတ်လုပ်မယ့် LNG စက်ရုံက ၂၀၂၅ မှာ လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထက်အရင် တရုတ်က ဆောက်နေတဲ့ စက်ရုံတခုရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၂၃ မှာ စတင်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပီး ထွက်ရှိမယ့် မဂ္ဂါဝပ်က ၁၃၉၀ မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်ပီး ဂျပန်က ဆောက်မယ့် စက်ရုံထက်ကို ပိုများပါတယ်။
ဂျပန်စက်ရုံက ၁၂၅၀ မဂ္ဂါဝပ် ထွက်ပါမယ်။ NLD အစိုးရဟာ ၅ နှစ်အတွင်း ရသလောက်ကြိုးစားတည်ဆောက်လာခဲ့ရာ အခုဆို လမ်းတွေ အရမ်းကောင်းလာသလို အခြားအခြေခံအဆောက်အဦးတွေလဲ တိုးတက်လာနေပါတယ်။
ကျန်ရှိနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးကို အခုအချိန်မှာ အသားပေးပီး တည်ဆောက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
၂၀၂၅ ခု ရောက်လို့ အမေစု အနားယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လမ်း၊ တံတားနဲ့ လျှပ်စစ် အစရှိတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ အတော်ပြည့်စုံနေပီလို့ ထင်မှတ်ရပါတယ်။
ထို့အတူ ယခု စတင်တဲ့ ပညာရေးစနစ်သစ်နဲ့အတူ ပေါ်ထွက်လာမယ့် မြန်မာလူငယ်တွေဟာ ၂၀၃၀ ကျရင် လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲ စတင် ဝင်ရောက်လာမှာပါ။
ဒီလို ပြည့်စုံနေပီဆိုရင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့က သိပ်လွယ်သွားပါပီ။ တဖက်မှာ အထူးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒီအချိန်ကျရင် ကုန်းရုန်းပီး ကြိုးစားကြရင်တော့ ၂၀၃၀ ကနေ ၂၀၄၀ မှာတော့ မြန်မာဟာ အာဆီယံမှာ ကျားတကောင်အဖြစ် ပြန်နိုးထလာပါတော့မယ်။
အမေစု ပြောခဲ့တဲ့ စင်ကာပူကို ကျော်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ အခု COVID ကာလမှာလို စည်းလုံးစွာ ကြိုးစားကြရင် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပါပီ။
အနှစ်နှစ်အလလက မျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ ရွှေပြည်တော်က ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ရှေ့မှာ ရောက်နေပါပီ။ အမေအိုက ယူလာပေးနေခဲ့ပီ။
အမေစုဟာ ဗိုလ်ချုပ်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ ရွှေနိုင်ငံကို တည်ဆောက်ဖို့ အားကုန် ထုတ်လုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါ။
သူတို့ သားအဖက တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့ကြပါပီ။ ကျနော်တို့ဘက်က မဲလေး ၁မဲ သွားပေးရုံနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်ကျေခွင့် ရှိနေပါပီ။
ဆရာအောင်ဝေးရဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပါမယ်။
“ ဒီ စံပယ်ပန်းရုံကလေး ရေ မလောင်းချင်နေပါ။
စံပယ်ပွင့်တွေ မွှေးလာရင်သင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူမွှေးရနံ့ ဝေစု ရမှာပါ။ “
ပနျးပနျနဆေဲမွနျမာပွညျကွီး နှငျ့ ရှပွေညျတျောကွီး မြှျောတိုငျး မဝေးတော့ပွီ ….
ရှပွေညျတျော မြှျောတိုငျး မဝေးတော့
ကမ်ဘာမှာ စီးပှားရေးတှေ ပွနျစတယျ။ ကြောငျးတှေ ပွနျဖှငျ့ကွတယျ။ COVID ကို နိုငျလိုကျပီဆိုပီး ရဲဝံ့စှနျ့စားလိုကျကွတယျ။ Mask တှေ မတပျကွတော့ဘူး။
အဲဒီအခြိနျမှာ COVID က နောကျတကွိမျ ထတှယျပါတယျ။ ဂပြနျမှာ မွို့တှေ ပွနျပိတျလိုကျရပီ။ Lock Down ပေါ့။ ၃လ ကြျော ပိုးကူးတဲ့သူ တယောကျမှ မတှခေဲ့တဲ့ ဗီယကျနမျမှာ ၃ ယောကျ သသှေားပီ။
ထိုငျးမှာလဲ အသဲအသနျ။ အမရေိကနျမှာလဲ မရပျတနျ့နိုငျသေးပါဘူး။ ဒီအခြိနျမှာ ဘာဖွဈဖွဈ စညျးကမျးတှကေို မလြှော့လိုကျတဲ့ မွနျမာအစိုးရကို ကြေးဇူးတငျရပါတယျ။
ဘောလုံးပှဲတှေ၊ ရှိုးပှဲတှေ၊ ဘာသာရေးအခမျးအနားတှကေနေ အတျောကူးစကျကွပါတယျ။
ကနြျောတုိ့ နိုငျငံကတော့ ပနျးပနျနဆေဲပါပဲ။ အခု ပိတျရကျတှမှော လူတှေ မွနျမာပွညျအနှံ့ စိတျခလြကျခြ ခရီးသှားကွပါတယျ။ ၃ ၄ လ လောကျ အိမျတှငျးပုနျးနရေတော့ သှားခငျြကွမှာပါပဲ။
အခုလို သှားနိုငျကွလို့လဲ ကနြေပျမိပါတယျ။ တခွားနိုငျငံတှေ ကြီးလနျ့စာစားဖွဈနခြေိနျမှာ ကနြျောတို့ပွညျသူတှေ စိတျခမျြးခမျြးသာသာ နနေိုငျတာ ဝမျးသာမိပါတယျ။
ဒီရလာဒျက ကမ်ဘာကို ရိုကျခတျပါတယျ။ အရငျကလို မဟုတျတော့ပဲ တနရောမှာ တခုခုဖွဈတာနဲ့ မိနဈပိုငျးအတှငျး ကမ်ဘာက သိကွတဲ့ခတျေထဲမှာ မွနျမာလို ငမှဲနိုငျငံ၊ လူ့အရငျးအမွဈ၊ အထောကျအပံ့နညျးတဲ့နိုငျငံက ဘာလို့ ဒီရောဂါကွီးကို ထိနျးနိုငျနတောလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားကွပါတယျ။
နောကျပီး ပွနျလညျထူထောငျရေးမှာလဲ စနဈတကနြဲ့ နှိုးထမှု ရှိတယျဆိုတာကို ကမ်ဘာက လကျခံလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစိုးရအပျေါ အကောငျးမွငျမှုက မြားပွားလာပါတယျ။
ဒါရဲ့ အကြိုးဆကျက ဆကျတိုကျခံစားရပါတယျ။ COVID ကာလမှာ အထညျခြုပျက အလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပိတျလိုကျရတာတှေ မနညျးမနော ရှိပမေယျ့ အနောကျတိုငျးက မွနျမာ့အထညျခြုပျရဲ့ အားကို အသိအမှတျပွုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အထညျခြုပျလုပျငနျးတှေ မပွိုလဲအောငျ EU က ငှကွေေးထောကျပံ့ပါတယျ။
ပွနျလညျထူထောငျရေးအတှကျ ကမ်ဘာ့ငှကွေေးရနျပုံငှအေဖှဲ့က ငှခြေေးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျလို နိုငျငံတှကေလဲ မွနျမာ့အရေးဆိုပီး စကားလုံးတိုကျပှဲထဲ ပွနျပါလာပါတယျ။ ရိုဟငျဂြာကိစ်စက တခနျးရပျသှားပါပီ။
အမရေိကနျက သူ့အကြိုးစီးပှားကို ကွညျ့ပါတယျ။ တရုတျလကျထဲ လှတျထားလိုကျခွငျးဟာ ခါးပတျလမျးကွီးဖွဈလာမှာဖွဈပီး အမရေိကနျအတှကျ အထိနာစနေိုငျပါတယျ။
COVID ဖွဈလိုကျခွငျးဟာ တရုတျသမ်မတရှီရဲ့ အိပျမကျတှကေို အကွီးအကယျြ နှောငျ့ယှကျလိုကျတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အစီအစဉျတှကေ ထငျထားသလို မဖွဈတော့ပဲ ကသောငျးကနငျးဖွဈနပေါတယျ။
ကုနျသှယျရေးတိုကျပှဲရဲ့ အကြိုးဆကျအဖွဈ နိုငျငံတကာက တရုတျကို ဖိအားပေးခြိနျမှာတော့ ဂပြနျက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အနီးကပျမဟာမိတျဖွဈလာပါတယျ။
ဂပြနျက မွနျမာရဲ့ ရောဂါထိနျးခြုပျပုံကို လေးစားသလို ပထဝီအနအေထားကိုလဲ တနျဖိုးထားပါတယျ။ တရုတျက ထှကျလာမယျ့ ဂပြနျလုပျငနျးတှကေို ချေါနိုငျဖို့ အာဆီယံနိုငျငံအားလုံးက အသညျးအသနျကွိုးစားနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အမစေုက ဟိုတနကေ့ အစညျးအဝေးမှာ ဂပြနျတှေ အကုနျစိတျဝငျစားသှားမယျ့ စီမံကိနျးကွီးကို ခပြွလိုကျပါတယျ။ မှနျပွညျနယျက စကျမှုဇုနျကွီးပါ။
မွနျမာပွညျမှာ အကွီးဆုံးဖွဈလာမယျ့ အဲဒီစကျမှုဇုနျဟာ အကောငျးဆုံးလဲ ဖွဈလာမှာပါ။
သူနဲ့ အတူ တညျဆောကျမှာက ပဲခူး-ကြိုကျထိုလမျးမကွီး၊ ဟံသာဝတီလဆေိပျသဈကွီးနဲ့ လှညျးကူးက စကျမှုဇုနျပါ ပါဝငျပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီလမျးမကွီးဟာ ပဲခူး-သနျလငျြလမျး၊ သီလဝါစကျမှုဇုနျ၊ ဟံသာဝတီလဆေိပျသဈကွီးနဲ့ ရနျကုနျ-မနျးလေး အဝေးပွေးလမျးမကွီးကို ခြိတျဆကျပါလိမျ့မယျ။ ကားလမျးက ထိုငျးအထိ ပေါကျမှာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီပတျလမျးကွီးကို အရှေ့-အနောကျ စီးပှားရေးစင်ျကွနျ(East West Economic Corridor) ရဲ့ တစိတျတဒသေအဖွဈ သတျမှတျပါတယျ။
အဲဒီလမျးဘေးမှာ နံရံတှေ ကာရံထားမှာဖွဈပီး အရငျကလို ကားလမျးဘေးမှာ အိမျဝယျလို့လဲ အကြိုးဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး။ တငျဒါကိုလဲ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိစှာ တကမ်ဘာလုံးကို ဖိတျချေါသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒီစီမံကိနျးကို ဂပြနျတှကေ အတျောကို စိတျဝငျစားသှားပါတယျ။ပထဝီအနအေထားက ကနျြအာဆီယံ နိုငျငံတှထေကျ ပိုကောငျးနလေို့ပါ။
အဆငျပွပေီဆိုရငျ အလုပျအကိုငျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ငှကွေေးဘီလီယံနဲ့ခြီပီး မွနျမာနိုငျငံကို ဝငျလာမှာပါ။ မှနျပွညျနယျနဲ့ ကရငျပွညျနယျကနေ ထိုငျးမှာ သှားလုပျနရေတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ တိုငျးရငျးသားတှေ တိုငျးပွညျထဲမှာပဲ အဆငျ့မှီမှီ လုပျကိုငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဒီလို စကျမှုဇုနျကွီးတှေ တညျဆောကျပီးရငျ မီးရဖို့ လိုပါတယျ။ ဟိုတနကေ့ ဂပြနျက ထုတျလုပျမယျ့ LNG စကျရုံက ၂၀၂၅ မှာ လညျပတျပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီထကျအရငျ တရုတျက ဆောကျနတေဲ့ စကျရုံတခုရှိပါသေးတယျ။ ၂၀၂၃ မှာ စတငျလညျပတျမှာဖွဈပီး ထှကျရှိမယျ့ မဂ်ဂါဝပျက ၁၃၉၀ မဂ်ါဂဝပျ ဖွဈပီး ဂပြနျက ဆောကျမယျ့ စကျရုံထကျကို ပိုမြားပါတယျ။
ဂပြနျစကျရုံက ၁၂၅၀ မဂ်ါဂဝပျ ထှကျပါမယျ။ NLD အစိုးရဟာ ၅ နှဈအတှငျး ရသလောကျကွိုးစားတညျဆောကျလာခဲ့ရာ အခုဆို လမျးတှေ အရမျးကောငျးလာသလို အခွားအခွခေံအဆောကျအဦးတှလေဲ တိုးတကျလာနပေါတယျ။
ကနျြရှိနတေဲ့ လြှပျစဈမီးကို အခုအခြိနျမှာ အသားပေးပီး တညျဆောကျဖို့ လုပျနပေါတယျ။
၂၀၂၅ ခု ရောကျလို့ အမစေု အနားယူခဲ့မယျဆိုရငျတောငျ မွနျမာနိုငျငံဟာ လမျး၊ တံတားနဲ့ လြှပျစဈ အစရှိတဲ့ အခွခေံအဆောကျအဦးတှေ အတျောပွညျ့စုံနပေီလို့ ထငျမှတျရပါတယျ။
ထို့အတူ ယခု စတငျတဲ့ ပညာရေးစနဈသဈနဲ့အတူ ပျေါထှကျလာမယျ့ မွနျမာလူငယျတှဟော ၂၀၃၀ ကရြငျ လုပျငနျးခှငျတှထေဲ စတငျ ဝငျရောကျလာမှာပါ။
ဒီလို ပွညျ့စုံနပေီဆိုရငျ နိုငျငံတကာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှကေို ဖိတျချေါဖို့က သိပျလှယျသှားပါပီ။ တဖကျမှာ အထူးအခှနျကငျးလှတျခှငျ့တှလေဲ ရှိနပေါသေးတယျ။
အဲဒီအခြိနျကရြငျ ကုနျးရုနျးပီး ကွိုးစားကွရငျတော့ ၂၀၃၀ ကနေ ၂၀၄၀ မှာတော့ မွနျမာဟာ အာဆီယံမှာ ကြားတကောငျအဖွဈ ပွနျနိုးထလာပါတော့မယျ။
အမစေု ပွောခဲ့တဲ့ စငျကာပူကို ကြျောအောငျ လုပျမယျဆိုတာ အလကားမဟုတျပါဘူး။ အခု COVID ကာလမှာလို စညျးလုံးစှာ ကွိုးစားကွရငျ ဘာမဆို ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ လမျးမှနျပျေါရောကျနပေါပီ။
အဲဒီ အနအေထားက ခြျောမသှားဖို့က တခုပဲ လိုပါတော့တယျ။ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနမှေ့ာ ခငျဗြားထညျ့လိုကျမယျ့ မဲတပွားပါပဲ။ အဲဒီမဲဟာ မွနျမာပွညျရဲ့ အနာဂတျကို ဆုံးဖွတျပေးပါတော့မယျ။
အနှဈနှဈအလလက မြှျောလငျ့ခဲ့ရတဲ့ ရှပွေညျတျောက ခငျဗြားတို့ ကနြျောတို့ ရှမှေ့ာ ရောကျနပေါပီ။ အမအေိုက ယူလာပေးနခေဲ့ပီ။
အမစေုဟာ ဗိုလျခြုပျမြှျောမှနျးခဲ့တဲ့ ရှနေိုငျငံကို တညျဆောကျဖို့ အားကုနျ ထုတျလုပျဆောငျနခေဲ့တာပါ။
သူတို့ သားအဖက တိုငျးပွညျအပျေါ တာဝနျကခြေဲ့ကွပါပီ။ ကနြျောတို့ဘကျက မဲလေး ၁မဲ သှားပေးရုံနဲ့ ဗိုလျခြုပျနဲ့ တိုငျးပွညျအပျေါ တာဝနျကခြှေငျ့ ရှိနပေါပီ။
ဆရာအောငျဝေးရဲ့ ကဗြာလေးနဲ့ အဆုံးသတျပါမယျ။
“ ဒီ စံပယျပနျးရုံကလေး ရေ မလောငျးခငျြနပေါ။
စံပယျပှငျ့တှေ မှေးလာရငျသငျလညျး ကြှနျုပျတို့နဲ့အတူမှေးရနံ့ ဝစေု ရမှာပါ။ “